Fanao mendrika ho an’ny Parlemantera : ohatra 8 fahita maneran-tany | Politika
Toy ny ahoana ny fomba fifandaminana anatin’ny parlemanta maneran-tany ? Inona no mety hanentana ny olom-boafidy hifandray ? Indro aroso etoana, ohatra valo mety hiteraka fomba fijery vaovao eo anivon’ny antenimierampirenena malagasy.
Parlemanta roandey : laharam-pahamehana ny vehivavy
Miavaka amin’ny firenena maneran-tany i Rwanda izay entin’i Paul Kagame noho ny toerana manokana omen’izy ireo ny vehivavy eo anivon’ny parlemantany. Miteronterona eny amin’ny laharana voalohany izy ireo satria mahatratra 50 amin’ny 80 ny solombavambahoaka eo anivon’ny antenimierampireneny. Tsy nitsororika avy an-danitra anefa na nitrebona ho azy tamin’ny tany ny zava-misy fa manana ny antony; satria taorian’ny fandripahan’olona niseho tamin’ny taona 1994, dia nandany ny llalàna momba ny fampimirana ny lahy sy ny vavy ity firenena afrikana ity. Ny Lalàmpanorenan’izy ireo ny taona 2003 dia mamaritra ho fiheverana fototra ny « ny fitovian’ny lahy sy ny vavy ary miara-dalana amin’izany ny fanomezana ny toerana farafahakeliny 30 % ho an’ny vehivavy eny anivon’ny rafitra mpanapa-kevitra ao anatin’ny Fanjakana ». Iantohan’ny rafitra manatontosa fifidianana io anjara sitrahina io ka manampy ny vehivavy roandey tsy hilavo lefona. Nampiharihary izany ny fifidianana farany natao tany Rwanda. Toerana 27 tamin’ireo 53 azo vokatry ny fifidianana dia norombahin’ny vehivavy.
Kongresy amerikana : ny fifotorana amina tsangan-kevitra sy ny fifandimbiasam-pahefana no mibaiko
Anisan’ny fitaratra azo alain-tahaka amin’ny fanajana ny fifotorana amin’ny tsangan-kevitra sy ny fifandimbiasam-pahefana ny Kongresy amerikana. Nahitana fiovàna tao anatin’ny taona nifandimby izao ny tontolo politika any Etazonia. Nibahan-toerana teo anivon’ny antenimierampirenena hatrany ny Demokraty tao anatin’ny fotoam-piasàna indroa nifanesy ary tompon’ny lakile kosa ny Repoblikana ao amin’ny antenimierandoholona. Voahaja ao anatin’ny rafi-pitantanan’izy ireo koa ny fisaraham-pahefana. Vokany, tsy mikoso-maso na ary tsy mataho-maso mena manoloana ny fitondrana Trump ireo mpanao lalàna sady mpanara-maso azy. Tsiahivina rahateo fa ny Repoblikana amin’izao fotoana izao no mitana ny fitondrana. Nanova ny karatra ho an’ny tontolo politika amerikana noho izany ny fiakaran’ny herin’ireo Demokraty ao anatin’io Andrimpanjakana io.
Angletera : fakan-tahaka amin’ny fisaraham-pahefana
« Miantoka ny zo amam-pahafahan’ny olom-pirenena manoloana ny jadon’ny fahefana mpanatanteraka ». Izany no tanjona imatimatesana amin’ny fiheverana mikasika ny fametrahana ny fisaraham-pahefana ao anatin’ny rafi-pitantanana ahitana governemanta. Nahita masoandro tany Angletera tamin’ny taona 1960 izany tamin’ny alalan’i John Locke ary hita ihany koa eo anivon’ny fironan-kevitra mifototra amin’ny fampiasana Lalàmpanorenana. Vokatra mivaingana ateraky ny famoronana Lalàmpanorenana ifampitondrana noho io foto-piheverana io ny famerana ny fahefana azo omena ny governemanta. Niainga tamin’izay ny fanavahana ireo karazam-pahefana misy ao anaty Fanjakana ; dia ny fahefana mpanao lalàna izay tokony hifototra amin’ny fanaovana lalàna, ny fahefana mpanatanteraka izay natao hampihatra ny lalàna lany. Fahatelo dia ny fahefam-pampiombonana, izay manana asa hiantoka ny fandriampahalemana. Azon’io fahefana farany io ifantohana koa ny mikasika ny fifandraisan’ny Fanjakana amin’ny firenen-kafa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Bundestag : Fitaratra amin’ny fanaraha-maso ny governemanta
antenimieran’ny solombavambahoaka izay kitro ifaharan’ny rafitra politika any Alemana ny Bundestag. Manana ny fitaovana rehetra hoenti-miasa hahazoana manara-maso ny asan’ny governemanta ireo solombavambahoaka ireo. Ampiasainy mandritra ny fivoriana azon’ny rehetra atrehina na ao anatin’ny asan’ny kaomisiona izany, na koa amin’ny alalan’ny kaomisiona parlemanterana misahana fanadihadiana ka hahazoan’izy ireo manao andrimaso amin’ny asan’ny governemanta. Anisan’ireny fitaovana ireny ny fitsirihana asaina ataon’ny manampahaizana, ny fanangonana porofo izay aravona an-tsoratra ka hiadiana hevitra ao amin’ny Bundestag. Tsy tery lalana izy ireo fa mampiasa ny fomba rehetra hahazoana manara-maso ny asan’ny mpanatanteraka.
Fahazoana ny vaovaon’ny parlemantera : Manome ohatra i Zimbabwe
Tafiditra ao anatin’ny fomba hoenti-manakaiky ny vahoaka, niezaka nametraka ivontoerana ahazoam-baovao momba ireo parlemantera (PCIC) ao anatin’ireo fari-piadidiana 120 misy ny parlemanta zimbaboeana. Fomba iray hahazoan’ny olom-pirenena manakaiky kokoa ireo olom-boafidiny izany ary hahafahana ihany koa mampahafantatra azy ireo izay zava-mitranga ao amin’ny antenimiera. Apariaka manerana ireo ivontoerana ireo noho izany ny vaovao rehetra momba ny parlemanta ary ny fametrahana ny toeram-piserana toy itony koa dia hahazoana mitazona ireo torohay fototra momba lafiny sosialy sy toe-karena amin’ny fari-piadidiana samihafa.
Saint-Kitts-et-Nevis : maodelin’ny fangaraharahana
Nisafidy ny fanomezana laka ny fangaraharahana mba hisongadinany ireo parlemantera any amin’ity firenena ity. Amin’ny alalan’ny fanalalahana ny fahazoam-baovao eo anivon’ireo Andrimpanjakana mpanao lalàna no entin’izy ireo manatanteraka izany ary eo koa ny famelana ny mpifidy hanao fanombanana azy ireo miainga amin’ny fifanatrehana imasom-bahoaka. Alefa mivantana amin’ny fahitalavitra sy ny radio ny fifanatrehana ka mampisongadina ny fampianarana entin’ny demokrasia izany amin’ny alalan’ireo fanontaniana eo noho eo apetraky ny parlemantera. Iray amin’ireo fanao mendrika amin’ny asan’ny mpanao lalàna ny amin’ny fanaovana tatitra sy ny fampirobohana ny olom-pirenena hahafantatra ny momba izany.
Nouvelle Zélande : tsy mpangataka atiny ny olom-pirenena
Ohatra hafa omen’ny Neozelandey kosa ny fanomezan’izy ireo sehatra ny mpifidy ao anatin’ny asan’ireo mpisolo tena azy. Mamporisika sy miantso ny olom-pirenena ho afaka miditra an-tsehatra amin’ny famolavolana lalàna mifehy ny fiainany ilay rafitra. Omen’io antenimiera io fahafahana hanao tolo-dalàna amin’ny alalan’ny gazety na fitaovan-tserasera hafa sy ny tranonkalan’ny Parlemanta noho izany ny mpisehatra rehetra amin’ny fiainam-pirenena na olon-tsotra. Mitana anjara toerana goavana ny fandraisana andraikitry ny olom-piçrenena toy izany amin’ny asan’ny parlemantera sy ny fiainana ny demokrasia ho an’ny Neozelandey amin’ny ankapobeny. Misy noho izany ny kaomisiona eo anivon’ilay antenimiera mandray an-tanana ny fitorohana na tolo-kevitra avy amin’ny olom-pirenena. Henoina mandritra ny fanadihadiana parlemantera ireto farany ary afaka mitondra ny fomba fijeriny mikasika ny fanontaniana samihafa mahasahana ny andavanandrom-piainany.
Parlemanta romana : manalalaka ny fahazoam-baovao
« Izay mihazona ny vaovao no tompon’ny fahefana », hoy ny fitenenana . Tafiditra ao anatin’ny zon’ny olom-pirenena ny hahazo vaovao, indrindra ny mikasika ireo asan’ny andrimpanjakana toy ny antenimiera. Ao anatin’ny rafitra demokratika dia manan-danja lehibe ny famelana ny olom-pirenena hisitraka izany. Tsy mandeha ho azy toa ny karatr’i Naivo anefa izany, fa maro be ny ny fahasarotana sedraina, saingy ho an’ny antenimiera romana kosa, mba ho fanajana ny lalàna ankapobeny momba ny fahalalahana mahazo vaovao, dia niezaka namaha ny olana izy ireo. Napetraka ho fomba fiasa na koa araka ny filany, noho izany, ny sampandraharaha manokana miandraikitra ny fanomezana ny vaovao rehetra mifandraika amin’ny asan’ny solombavambahoaka ho an’ny olom-pirenena.
sary : www.iknowpolitics.org
Nanangona Karina Zarazafy